Allow aysan naga noqon Kud-ka-guur oo Qanjo-u-guur - Ceelhuur Online
Home > Wararka Maanta > Allow aysan naga noqon Kud-ka-guur oo Qanjo-u-guur
February 10, 2017 admin729
Allow aysan naga noqon Kud-ka-guur oo Qanjo-u-guur by mohammed Haji Ingiriis
Weli waxaa lagu dhex jiraa election coma, lagamana soo kicin suuxdintii dhacday 8-da bisha. Hase ahaatee, waxaa hoosta ka shaqeysanaya kooxihii iyo kuwii weligood ka dhex shaqeysan jiray Muqdisho dhexdeeda ee danahooda dhaqaale ka hormarin jiray danaha danyarta. Waxaan caawa dib u akhristay Lévi-Straus’s structuralism and structural anthropology, si aan ugu fahmo waxa Xamar ka socda illaa iyo Arbacadii, una qiyaaso waxa ka dhalan doona ololaha hoose ee socda iyo cawaaqib-xumada laga dhaxli doono. Muddo 24 saac kaddib, waxaa ii suura-gashay inaan si fiican u fahmo political possibilities and power structure-ka Madaxweynaha cusub Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Haddii aan taas la fahmin, lama fahmi karo qodxaha horyaalla hoggaanka cusub oo ay tahay inuu si xeelad leh kaga gudbo, si aan ku dhisneyn caadifad – nin-jecleysi iyo nin-necbeysi.
Waa qoray proff mohammed Haji Ingiriis
MD:Farmaajo oo tacsi u diray ehelada dadkii ku dhintay qaraxii Ex-Koontarool
April 8, 2019 Cali Yare